Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Maya Dalxiiska Kenya ee UNWTO: Afrika way xanaaqsan tahay!
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Kenya • News • Dadka • Wararka Spain • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wasiirka dalxiiska iyo duurjoogta Kenya Mr. Najib Balala
Hooyo Afrika maanta way xanaaqday. Sida la filayo by eTurboNews, Xoghayaha Guud ee UNWTO ayaa ku gacan seyray codsi uga yimid Wasiirka Kenya oo ahaa in shirka Golaha loo dhan yahay lagu qabto Kenya.
Madrid goob ahaan waxay u muuqataa inay faa'iido cad u tahay Zurab Pololikashvili in dib loogu xaqiijiyo Xoghayaha Guud muddo kale oo 2 sano ah.
Morocco waxay ahayd inay martigeliso Shirka Guud ee UNWTO Noofambar 28 - Diseembar 3, 2021, laakiin waa la baajiyay amniga COVID dartiis. Codsigan waxa laga yaabaa inuu ku jahawareeray tarjumaada
Waxay UNWTO ku qaadatay 3 maalmood in ay ku wargeliso dalalka xubnaha ka ah, saacado gudahood ka dib markii ay heshay qoraalkan, Kenya waxay u soo bandhigtay inay gasho booska Morocco oo ay martigeliso xafladda. Kenya waxay ahayd doorashada lambarka 2 ee dooddii asalka ahayd 2 sano ka hor.
Xoghayaha guud ee UNWTO ayaa si cad u diiday dalabka Kenya.
Qaar ka mid ah Wasiirada Dalxiiska ee Afrika ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin go'aanka UNWTO, waxaana qaarkood ay tilmaameen in Afrika ay ka carooto tallaabada lagu hor istaagayo codsiga dal Afrikaan ah oo martigelinaya.
Niyad jabsan ama xitaa xanaaqsan mudane. Najib Balala, Xoghayaha Dalxiiska ee Kenya, ayaa xaqiijiyay, “UNWTO Xoghayaha Guud Zurab Pololikashvili wuxuu si cad u diiday codsigeena ahaa inaan martigelino Golaha Guud." Jawaabta UNWTO waxay ahayd in ay aad u daahday, ma jiro waqti ku filan.
Wasiir kale oo Afrikaan ah ayaa yiri, UNWTO waxay mareysaa meel daciif ah, waxayna lumineysaa kalsoonida buuxda ee Afrika. Tani waa waqtigii ugu fiicnaa ee lagu weydiin lahaa Golaha Guud cod qarsoodi ah si runtii loo arko haddii Zurab dib-u-doorashadii golaha fulinta la xaqiijiyo.
Ergo kale oo aan Afrika joogin ayaa yiri: Qofna ma rabo in dib loo doorto. Waa inaan sameynaa wax walba oo suurtagal ah si aan isaga takhalusno. Waqtigu waa laga yaabaa inuu hadda yimid.
Shirweynihii guud ee Chengdu, Shiinaha, ee 2017, Zurab waxaa lagu xaqiijiyay ku dhawaaqida, maaha cod qarsoodi ah. Waxay qaadataa hal waddan si aad u weydiisato cod qarsoodi ah.
Dad badan ayaa qaba in Zurab uusan heli doonin aqlabiyadda 2/3 ee lagama maarmaanka ah haddii ay jirto cod qarsoodi ah oo ka dhaca Golaha Guud ee soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, haysashada Golaha Guud ee ka dhacaya Madrid waa faa'iido weyn isaga. Waxaa la filayaa in wasiirradu aysan u safri doonin Madrid si ay uga qaybgalaan shirka guud ee UNWTO waxaana lagu bedeli doonaa shaqaalaha safaaradda.
Afrika ayaa leh tirada ugu badan ee dalalka xubnaha ka ah UNWTO, laakiin ma jiraan dalal badan oo Afrikaan ah oo safaarado ku leh Madrid ama kheyraad ay u soo diraan wasiirka dalxiiska ee dhacdadan Spain.
Zurab Pololikashvili wuu yaqaan dariiqa uu u marayo bulshada dibloomaasiyadeed ee Madrid. Waxa uu ahaa safiirka Jamhuuriyadda Georgia ka hor intii aanu la wareegin UNWTO.